Pepa-Yakavakirwa Packaging Inokwidziridzwa neVatengi kune yayo Yezvakatipoteredza Attributes |Haishu
Pepa-Yakavakirwa Packaging Inokwidziridzwa neVatengi kune yayo Yezvakatipoteredza Attributes
Mhedzisiro yeongororo itsva yeEuropean inoratidza kuti mapepa-anorongedza anofarirwa kuve nani kune zvakatipoteredza, sezvo vatengi vanoramba vachiziva nezvesarudzo dzavo dzekurongedza.
Ongororo yevatengi ve5,900 vekuEurope, yakaitwa nemushandirapamwe weindasitiri Mativi maviri uye yakazvimiririra yekutsvagisa kambani Toluna, yakatsvaga kunzwisisa zvinofarirwa nevatengi, maonero, uye maitiro ekurongedza.
Vakabvunzwa vakakumbirwa kuti vasarudze zvinhu zvavanoda zvekurongedza (bepa/kadhibhodhi, girazi, simbi, uye plastiki) zvichibva pane 15 zvakatipoteredza, zvinoshanda, uye zvinoonekwa hunhu.
Pakati peaya gumi mapepa / makadhibhokisi ekurongedza anofarirwa, 63% yevatengi vanoisarudza kuti ive nani kune nharaunda, 57% nekuti iri nyore kudzokorora uye 72% inofarira bepa / makadhibhokisi nekuti inogoneka kumba.
Girazi kurongedza ndiyo inosarudzika sarudzo yevatengi yekupa zvirinani kuchengetedzwa kwezvigadzirwa (51%), pamwe nekugona kushandiswazve (55%) uye 41% inofarira kutaridzika uye kunzwa kwegirazi.
Mafungiro evatengi kurongedza epurasitiki akajeka, ne70% yevakapindura vachitaura kuti vari kushingairira kutora matanho ekudzikisa mashandisiro avo epurasitiki kurongedza.Kurongedza kwepurasitiki kunoonekwawo nenzira kwayo sechinhu chidiki-diki, uye 63% yevatengi vachitenda kuti ine mwero wekudzokorodza usingasviki 40% (42% yemapurasitiki ekurongedza anodzokororwa muEurope1).
Ongororo iyi yakawana kuti vatengi muEurope yese vanoda kushandura maitiro avo kuti vatenge zvakachengetedzeka.44% vanoda kushandisa mari yakawanda pane zvigadzirwa kana zvakaiswa mumidziyo inoenderera uye ingangoita hafu (48%) vangafunga kudzivirira mutengesi kana vachitenda kuti mutengesi haasi kuita zvakakwana kudzikisa kushandiswa kwayo kwekusadzokororwa kurongedza.
Jonathan anoenderera mberi achiti,“Vatengi vari kuwedzera kuziva nezve kurongedza kusarudzwa kwezvinhu zvavanotenga, izvo zvave kumanikidza mabhizinesi.-kunyanya muzvitoro.Tsika dze'gadzira, shandisa, bvisa'iri kuchinja zvishoma nezvishoma.”